Cristiano Ronaldo oo doonaya inuu kusoo laabto Man Utd. - Caasimada Online
Home Warar Cristiano Ronaldo oo doonaya inuu kusoo laabto Man Utd.
Cristiano Ronaldo oo doonaya inuu kusoo laabto Man Utd.
Weeraryahanka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa doonaya inuu kusoo laabto xagaaga kooxdiisii hore ee Manchester United.
Wargeyska SunSport ayaa daaha ka qaaday in xidigii hore ee United uu rajeynayo inuu ka tago Real Madrid uuna kusoo laabto Old Trafford, maalin ka dib markii uu sheegay tababare Alex Ferguson inuu jeclaan lahaa inuu kooxda kusoo laabto.
27-jirkaan heerka caalami ee dalka Portugal ayaa loo sheegay in si fiican loogu soo dhoweyn doono garoonkii uu horay ugu soo ciyaari jiray marka ay Real Madrid lugta labaad ee wareega 16ka Champions League wajahdo United.
Xidigaan oo 80 milyan oo ginni Los Blancos kula biiray 2009, ayaa si aad ah kooxdaas uga soo dhex muuqday wuxuuna 170 kulan ku dhaliyey 169 gool. Waana mid ka mid ah xidigaha ugu mushaarka badan caalamka taasoo keentay inuu 810 milyan oo ginni ku qaato 2½ (Laba sano iyo bar) gudahood.
Si kastaba, Ronaldo ayaa isha ku haaya inuu dib ugu soo laabto kooxdiisii hore ee Red Devils. Halka uu sidoo kale doonayo inuu mar labaad la shaqeeyo tababare Fergie.